आशिरमान र शिल्पाको ब्रेकअपमा को-को थपिए ? « Ramailo छ
आशिरमान र शिल्पाको ब्रेकअपमा को-को थपिए ?
रोहित अधिकारी फिल्मस् र हेप्पी प्लानेट फिल्मस् संयुक्त ब्यानरमा बन्ने फिल्म ब्रेकअप का सम्पूर्ण कलाकारहरु तय भएका छन् । निर्माता रोहित अधिकारीका अुनसार फिल्ममा नायक आशिरमान देशराज जोशी, नायिका शिल्पा मास्के सँगै अभिनेता सरोज खनाल, नायक रेमनदास श्रेष्ठ, सलोन बस्नेत र इच्छा कार्की मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत हुनेछन् ।
हेमराज बिसीको निर्देशनमा बन्ने फिल्म ‘ब्रेकअप’को यही फागुन २५ गतेदेखि छायाँकन सुरु हँदैछ । फिल्मको ५० प्रतिशत छायाँकन पर्यटकिय नगरी पोखरा र बाँकी छायाँकन अष्ट्रेलियामा गरिने निर्माता अधिकारीको भनाई छ । फिल्ममा रोहितसँगै दीपक खतिवडा, रेनु राणा र रुपक थापाले लगानीमा साझेदारी गरेका छन् । नरेन्द्र मैनालीले खिच्ने फिल्ममा विशेष पाण्डे, बिराज गौतमको संगीत रहनेछ भने कोरियोग्राफी कविराज गहतराजको रहनेछ ।